Igbo, John: Lesson 087 - Atọ n'Ime Otu na-adabere na ndị kwere ekwe site n'aka Onye Nkasi Obi (Jọn 14:12-25) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 087 (The Holy Trinity descends on believers)
15 Ọ buru na i hurum n'anya, debe ihe nile M'nyere n'iwu.
Oziọma na-enye ekele maka Calvari. Onye na-adịghị ekwusa ozi ọma amataghị nnwere onwe Kraịst. Ọ bụrụ na ịchọta na ekpere na àmà ahụ abaghị uru, nyochaa onwe gị ma ị na-ebi n'ịhụnanya Kraịst, ma ọ bụ mmehie gị na-egbochi ngọzi ahụ. Na-ekwuputa na i nweghi ike n'ihu Jisos ka e wee ghara ibipụ iyi nke ngọzi. Onyenwe anyị enyewo anyị ọtụtụ iwu: Hụ ndị iro gị n'anya, na-ekiri ma na-ekpe ekpere ka ị ghara ịbanye n'ọnwụnwa. Zie okè dika Nna-unu nke elu-igwe zuru okè; Biakutem, unu ndi nile nādọb͕u onwe-unu n'ọlu, ndi nādọb͕u kwa onwe-ha n'ọlu, m'geme kwa ka unu zuru ike. Ejiri ihe odide edozi ndia achikota ihe ndia: hita ibe gi n'anya dika m huru gi n'anya. Ihe o nyere n'iwu abughi ibu arọ, kama enyemaka nke ndu na uzo nke okwukwe na ima.
Onye ọ bụla nke nwere ihe mgbapụta Jizọs apụghị ibi ndụ n'onwe ya ma na-ejere Kraịst Onye Nzọpụta ozi.
16 M ga-ekpegara Nna m ekpere, ọ ga-enyekwa gị Onye Ndụmọdụ ọzọ, ka ya na gị nọrọ ruo mgbe ebighi ebi, - 17 Mmụọ nke eziokwu, onye ụwa apụghị ịnata; n'ihi na ọ dịghị ahụ ya, ọ maghịkwa ya. Ị mara ya, n'ihi na ọ na-anọnyere gị, ọ ga-anọkwa n'ime gị.
Onye na - agbasi mbọ ike ime ihe kwekọrọ n'iwu Jizọs nyere onwe ya ga - ada mbà. N'ihi nke a, Jizọs rịọrọ Chineke arịrịọ ka o zitere Onye Nkasi Obi, Mmụọ Nsọ. O nwere ọtụtụ ọrụ ebe a. Ọ bụ Mmụọ nke eziokwu nke na-egosi anyị oke mmehie anyị. Mgbe ahụ ọ na-egosi anyị nà Jizọs kpogidere n'ihu anyị, na-emesi anyị obi ike na nke a bụ Ọkpara Chineke nke na-agbaghara mmehie anyị. Ọ na-eme ka anyị bụrụ ndị ezi omume n'ihu Chineke site na amara. Mmụọ a gọziri agọzi na-enye anyị ọmụmụ nke abụọ. Ọ na-emeghe ọnụ anyị ịkpọ Chineke Nna anyị. Mgbe ahụ anyị ga-enwe obi ike na anyị bụ ụmụ Chineke n'ezie site na Mmụọ nke ịme ka ọ bụrụ onye e doro. N'ikpeazụ, ọ na-aghọ onye na-akwado anyị ịgbachitere anyị. Ọ na-eguzo n'akụkụ anyị ma na-eme ka anyị guzosie ike n'ihu Setan, na-ekwenye anyị na nzọpụta zuru oke. Anyị enweghị ike ịchọta ụfọdụ n'ime ọnwụnwa ma ọ bụ afọ ojuju anyị n'ụwa a ma ọ bụghị site na Nkasi obi ahụ Jizọs zitere anyị.
Odigh onye obula nwere Mo Nso site n'udi, obugh onye mara ihe ma obu onye uri ma obu onye ozo. Mmụọ a bụ ihe dị ebube, ma na-abịakwasị ndị kwere na ọbara Kraịst. Onye na-ahụghị Jizọs n'anya ma ọ bụ nabatara ya enweghị Mmụọ na-ebi n'ime ya. Mana onye hụrụ Jizọs n'anya ma nabatara nzọpụta ya nwere ọṅụ na omume. Site na Mmụọ Nsọ n'ime obi anyị anyị na-enweta ike Chineke n'etiti adịghị ike. Jizọs mesiri gị obi ike na Onye Nkasi a agaghị ahapụ gị n'ọnwụ maọbụ ikpe, n'ihi na ọ bụ ndụ ebighị ebi.
18 Agaghị m ahapụ gị ụmụ mgbei. M ga-abịakwute gị. 19 N'oge na-adịghị anya, ụwa agaghịkwa ahụ m ọzọ; ma ị ga-ahụ m. N'ihi na m dị ndụ, ị ga-adịkwa ndụ. 20 N'ubọchi ahu unu gāmara na Mu onwem nọ nime Nnam, na unu onwe-unu nimem, Mu onwem kwa nime unu.
Mgbe onye ahụ raara ya nye wee pụọ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya ga-ahapụ ha n'oge na-adịghị anya, ha agaghị enwe ike ịgbaso. Ma o kwukwara na ya ga-alaghachikwuru ha. Ọ maara banyere egwu ha, okwu ya nwekwara ihe abụọ: Nke mbụ, ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ, ebe Onyenwe anyị bụ Mmụọ a. Nke abuo, ọbịbịa ya n'ebube na njedebe oge. N'ihi ihe abụọ a, ọ ghaghị ịhapụ ha ma gaakwuru Nna ya. Enweghi uzo a, Mo Nso agagh abiakwute ayi.
Mmụọ a bụ onye na-emeghe anya na obi ozugbo. Anyị maara na Jizọs ezughị ike n'ili dị ka ndị ọzọ na-eme, kama na ọ dị ndụ, na Nna ya nọ. Ndụ ya bụ ntọala nke ụwa na nzọpụta anyị. N'ihi na o meriri ọnwụ, ọ na-enye anyị ndụ, ka anyị onwe anyị wee nwee ike imeri ọnwụ site n'okwukwe ma bie ndụ n'ezi omume nke Kraịst. Okpukpe anyị bụ otu n'ime ndụ jupụtara n'olileanya.
Mmụọ nke nkasi obi bụ Mmụọ nke Chineke bụ onye na-abịa ibi n'ime anyị, ma mee ka anyị kwenye nà Ọkpara ahụ dị n'ime Nna ahụ na Nna ahụ n'ime Ọkpara ahụ zuru oke. Ihe omuma ime omuma nke Mo Nso di otua adighi ka omumu nke ugwo, ma obu onye kwere ekwe, ka ayi we buru Chineke dika Jizos. Ihe omimi ndi a nime Mo nebu ihe ayi naghagh dika madu.
Jisos ekwughi na ya choro ibi nime gi iche, "ma mu na gi nebi". Onye nke Kraist abghi naan¸ ebe obla nke Mmo Nso; ọ dị ka nkume e setịpụrụ n'ụlọ a nke Chineke. Ndị niile kwere ekwe na-ekere òkè n'ime ime mmụọ a. Emere nkwa a na otutu, "I no nime m na m n'ime gi". Mkpakọrịta nke ndị nsọ bụ ebe Jizọs na-ekpughe onwe ya. Ị na-achọpụta na Onyenwe anyị na-emechi nkwa a na ụgwọ "Na-ahụrịta ibe gị n'anya dika m hụrụ gị n'anya"? Obighi naan¸ mka ejirim nye Kraist, ma anyi niile gaeji juputazuo nke Chineke.
EKPERE: Anyị na-ehulata n'ihu gị, Nwa atụrụ Chineke dị nsọ; site n'ọnwụ gị ka anyị nata ndụ ebighị ebi. Gbaghara obere okwukwe anyị, amaghị anyị, ka ihe ọ bụla ghara igbochi gị na anyị. Ka anyị hụ gị n'oge niile anyị na-anwale, ma na-ebi na nghọta ahụ dị elu. Anyị na-ekele gị na Onye nkasi obi anyị abịawo, Mmụọ nke eziokwu ahụ ga-eme ka anyị dị n'otu ruo mgbe ebighị ebi.
Olee àgwà ndị Jizọs na-emetụta Mmụọ Nsọ?